PUNTLAND Oo Ku Gacan Seertay Dalabkii Beesha Murusade - Caasimada Onli...
PUNTLAND oo ku gacan seertay dalabkii beesha Murusade – Caasimada Onli…
Gaalkacyo (Wararka Maanta) – Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland, Mudane Cabdiladiif Muuse Nuur (Sanyare) ayaa u jaawabay beesha Murusade oo dhowaan soo saartay digniin ku aadan rag siddeed ah oo ay Puntland ku xukuntay dil toogasho ah.
Sanyare oo ka qeyb-galayey munaasabad gaar ah oo ka dhacday Mudug ayaa shaaca ka qaaday in dadka u doodaya xukumanayaasha ay soo adeegsadeen Al-Shabaab, sida uu hadalka u dhigay, isla-markaana ay doonayaan inay u doodaan rag ‘dambiileyaal ah’.
Wararka Maanta : Al-Shabaab oo war kasoo saaray dagaalkii Bacaadweyn, soona bandhigay s...
“Nimanka hadda loo qeylinayo 2012-kii ayey Gaalkacyo yimaadeen, Shabaab ayaa kawaanka u furay dadka laaya iyaga yiri bistooladaha iyaga ayaa u geday. 2012-kii ninkii ay ugu dambeysay baa Shabaab wuxuu yiri shir jaraa’id qabta oo waxaad tiraahdaan wiilal baa Gaalkacyo noolaga heestaa waxaa Shabaab aheyn oo aan cadow nahay ma jiro,” ayuu yiri guddoomiyaha maamulka gobolka Mudug ee dhanka maamulka Puntland.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale intaasi ku sii daray in cid kasta oo ay maxkamaddu xukunta ay tahay in lagu fuliyo xukunka lagu riddo markaasi.
“Dambiile Shabaab ah inta qabano qabiil u siidayn-mayno luqadaha Argagixisaday ka mid tahay inay dadka adeegsadan fariimaha ay rabaana ay dhex-marsadaan, cid kasta oo ay maxkamaddu xukuntana waa fulin,” ayuu hadalkiisa raaciyey gudoomiye Sanyare.
Si kastaba, Arbacadii ayey aheyd markii ay Maxkamadda ciidamada Puntland ku xukuntay dil toogasho ah 8 dhalinyaro ah oo la sheegay in ay ahaayeen shabakad ka tirsan Al-Shabaab oo dilalka madax-jabinta iyo qaraxyada ka geysan jiray Gaalkacyo
Al-Shabaab oo weerar khasaare geystay ka fulisay BALCAD – Caasimada On…
Puntland oo ka jawaabtay cabasho laga muujiyay dad lagu xukumay dil…
Wararka Somali37 mins ago